Kenya oo duqeysay xarunta shirkadda Hormuud ee degmada Ceelwaaq | Xaysimo
Home War Kenya oo duqeysay xarunta shirkadda Hormuud ee degmada Ceelwaaq
Kenya oo duqeysay xarunta shirkadda Hormuud ee degmada Ceelwaaq
Faah faahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya duqeyn xalay saqdii dhexe diyaarad milatari oo ay leedahay Kenya la eegatay xarun ay shirkadda isgaarsiinta ku leedahay gudaha degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo.
Duqeynta oo aheyd mid xoogan ayaa si gaar ah uga dhacday deegaanka Xiisa Guur oo 20-KM u jira magaaladaasi.
Mid ka mid ah sarakiisha ciidanka dowladda ee ka howlgala Ceelwaaq ayaa VOA u sheegay in illaa 11 Gantaal lala beegsaday xarunta shirkadda Hormuud, islamarkaana uu haatan socdo baaritaano ku aadan khasaaraha ka dhasahy weerarkaasi.
Sidoo kale wuxuu tilmaamay in dadka shacabka ah ay la soo daristay cabsi ku aadan waxyeelo ka soo gaarta duqeyntaasi.
Kenya ayuu sidoo kale ku eedeeyey inay ku soo xadgudubtay dhulka Soomaaliyeed, wuxuuna ku goodiyey inay jawaab deg-deg ah ka bixin doonaan arrintaasi.
Illaa iyo hadda wax hadal ah kama soo bixin dowladda dhexe iyo Jubbaland oo ku aadan weerarkaasi lala eegtay xarunta Hormuud oo ay leeyihiin muwaadiniin Soomaaliyeed.
Si kastaba ha ahaatee ma’ahan markii ugu horreysay oo ciidamada dowladda Kenya ay burburiyaan xarun ay leedahay Hormuud, iyagoo marar badan cagta mariyey xarumo ay shirkadaasi ku laheyd gobollada Jubbooyinka iyo Gedo ee koonfurta dalka Soomaaliya.